Taliska Asluubta Soomaaliyeed Oo Tababar u xiray Cutubyo ka Tirsan Ciidanka Asluubta.
Monday September 14, 2020 - 18:49:01 in Wararka by Mustaf Xuseen
Munsabad tababar loogu xirayay dufcadii 1aad ee ciidamo ka tirsan Asluubta islamarkaana tababar kale loogu furay dufcadii 2aad ee ciidamada Asluubta ayaa waxaa ka qeebgalay taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed iyo saraakiil kale.
Tababarka oo socday 45 cisho ah ayaa lagu barayay ciidanka sida loo ilaaliyo xabsiyada dalka iyo dhaqan celinta maxaabiista.
Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sareeye guuto. Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in ciidamadan ay ka shaqayn doonaan xabsiga dhaxe,isagoo balanqaday in amaanka xabsiga dhexe aad loo adkayn doono si aysan u dhicin falal la mid ah kii ugu dambeyay.
Taliska Ciidanka Asluubta ayaa wada dadaallo ku aadan sidii loo tayayn lahaa ciidanka Asluubta soomaaliyeed.